मुक्तिपछिका माघी बेग्लै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मुक्तिपछिका माघी बेग्लै
अहिले थारु गाउँमा न कमैया, कम्लरीका लागि बार्गेनिङ हुन्छ, न त कोही अर्काका घरमा दास बन्न जानुपर्छ । परिवारका सबै सदस्य एक ठाउँमा जम्मा भएर माघी मनाउन पाइरहेका छन् ।
माघ १, २०७७ प्रदेश ब्युरो
भैरहवा — माघी पर्व आयो कि थारू गाउँमा कमैया, कम्लरी खोज्न सुरु हुन्थ्यो । पश्चिम तराईका हरेक थारू गाउँमा माघीसँगै जमिनदार र मालिकको लस्कर लाग्थ्यो । आउँदो वर्ष कसलाई कमैया, कम्लरी राख्ने र त्यसका लागि कसरी फकाउने भन्ने तयारी सुरु हुन्थ्यो । माघी थारू समुदायको महान् पर्व हुँदाहुँदै यो दासताको पर्व बन्ने गरेको थियो ।
माघीकै दिनदेखि कमैया कम्लरीको नवीकरण हुन्थ्यो तर अहिलेको माघी फेरिएको छ । न त थारू गाउँमा कमैया, कम्लरीका लागि बार्गेनिङ हुन्छ, न कोही अर्काका घरमा दास बन्न जानुपर्छ । परिवारका सबै सदस्य एक ठाउँमा जम्मा भएर माघी मनाउन पाइरहेका छन् ।
घोराही–१६ स्थित मुक्त कमैया शिविरमा बसिरहेकी सन्तोली चौधरीलाई माघी मनाउने चटारो छ । उनी अचेल स्वतन्त्र रूपमा पर्व मनाउन पाइरहेकी छन् । पर्वमा चाहिने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता पनि छैन । उनी तरकारी, फलफूल बेचेर दैनिक २ हजारसम्म कमाउँछिन् । ‘अचेल माघी खुसीसाथ मनाउन पाइएको छ । पहिले यस्तो बेला कि त जमिनदारका घरमा भइन्थ्यो कि कसका घरमा कम्लरी बस्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । उनका श्रीमान् चुरमान पनि मुक्त कमैया हुन् । उनी फर्निचरको काम गर्छन् । उनीहरूले घडेरी किनेर नयाँ घर बनाएका छन् । ‘आधा जीवन कमैया बसियो तर केही परिवर्तन भएन । जस्तो कमैया बस्यो, त्यस्तै निस्केको हो,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्ना नाममा जग्गा र घर भएको छ । छोराछोरी पढेर जागिर खाने भइसके । सन्तुष्टि मिलेको छ ।’
राप्ती–२ बराखुटीकी विपत्ती चौधरीले सिलाइकटाइ गरेर जीवनयापन गरिरहेकी छन् । त्यसबाट उनले दैनिक ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छिन् । यही कमाइले उनले छोराछोरी पढाइरहेकी छन् । जग्गा किन्दाको ऋण तिरिन्, नयाँ घर बनाइन् । ‘पहिले कमैया बस्दा घरबास थिएन, आफ्नो भन्ने केही थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आफ्नै घरबास भएको छ । छोराछोरी कमैया कम्लरी बस्नुपरेको छैन । पहिलेको कुरा सम्झँदा त यस्तो दिन पनि आउँदो रैछ र भन्ने लाग्छ ।’
२०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्ति र ०७० असार १३ गते कम्लरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणालगत्तै कमैया कम्लरी प्रथा अन्त्य नभए पनि बिस्तारै चेतनाको विकाससँगै थारू समुदाय कमैया, कम्लरी प्रथाविरुद्ध उभिन सक्ने भएको हो । पश्चिम तराईमा जमिन्दारको जग्गा अधियाँ कमाउन पाएबापत या ऋण पाएबापत कमैया, कम्लरी बस्नुपर्ने चलन थियो । खाना, वर्षमा दुई जोडा कपडा र केही धान पाएका भरमा रातदिन जमिनदारका घरमा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले कमैया कम्लरीबाट मुक्त भएपछि धेरैले आफ्नै व्यवसाय गरेर, छोराछोरी पढाएर र आयआर्जनका विभिन्न उपाय गरेर जीवनमा ठूलो परिवर्तन गरेका छन् ।
सरकारले ०५७ सालमा लिएको तथ्यांकअनुसार पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा १८ हजार २ सय ८८ परिवार मुक्त कमैया छन्, जसअनुसार दाङमा १ हजार ५९, बाँकेमा १ हजार ३ सय ४२, बर्दियामा ६ हजार ९ सय ४९, कैलालीमा ५ हजार ९ सय २६ र कञ्चनपुरमा ३ हजार १२ परिवार मुक्त कमैया छन्, जसमा ९८ हजार ९ सय ८५ जना सदस्य छन् । मुक्त भएका अधिकांश कमैयाको जीवनमा परिवर्तन आएको र अहिले कमैया बस्ने अवस्था नरहेको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए ।
‘अहिले थारू गाउँमा कोही पनि कमैया, कम्लरी खोज्न आउँदैन । पहिले माघीसँगै साना नानीहरूको रुवाबासी हुन्थ्यो । माघीकै बेलादेखि अरूका घरमा काम गर्न जानुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘पर्व मनाउनेभन्दा बढी कसका घरमा कमैया, कम्लरी जानुपर्ने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । माघी दासताको पर्व थियो । अहिले त त्यस्तो त्रास केही पनि छैन ।’
कमैया मुक्तिले थारू समुदायमा नसोचेको परिवर्तन ल्याएको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर रावत बताउँछन् । ‘पहिले माघी आयो कि कमैया, कम्लरी जानेकै पिर हुन्थ्यो । पर्व मनाउने बेला खुसीभन्दा बढी चिन्ता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो समस्याबाट पश्चिम तराई पूरै मुक्त छ । कोही पनि कमैया, कम्लरी पठाउन तयार छैन । बरु सबैले आआफ्नो घरबास बनाएर नयाँखालको जीवन सुरु गरेका छन् ।’
पहिले कतिपय कम्लरीले माघीमा समेत घर जान पाउँदैनथे । अहिले पश्चिम तराईमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कम्लरी रहेको र तीमध्ये १ हजार ३ सय ५९ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । आमाबुबा तथा घरबास नभएका १ सय ६६ मुक्त कम्लरी दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका छात्रावासमा बसेर पढिरहेका छन् ।
मुक्त कम्लरीले नै पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा ४३ वटा सहकारी खोलेका छन्, जसमा १२ हजार ९ सय ४९ सदस्य छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर ३ हजार २५ मुक्त कम्लरीले विभिन्न व्यवसाय गरिरहेको मञ्चकी कोषाध्यक्ष विष्णु चौधरीले बताइन् । ‘व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । घरपरिवारलाई आवश्यक पर्ने खर्चसमेत जुटाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले ऋण तिर्न नसकेर कम्लरी बस्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त गरेको छ ।’
कतिपय कम्लरीले स्नातक, स्नातकोत्तर तहसम्म उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । केही सामाजिक संघसंस्थाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कमैया, कम्लरी आन्दोलनमा लाग्दालाग्दै दाङकी शान्ता चौधरी र बर्दियाकी सुकदैया चौधरी सभासदसम्म भए । ‘अहिले पहिले जस्तो अवस्था छैन । कमैया, कम्लरीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ,’ शान्ताले भनिन्, ‘दासताबाट थारू समुदायले मुक्ति पाएको छ । कम्लरीहरूले पढ्न पाएका छन् । सरकारले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन थालेको छ ।’
बाँसगढीकी गीता थारूलाई धुमधामले माघी मनाउने मन थियो । न्यानो लुगा लगाउने, तातो मीठो खाने र परिवारसँग बसेर नाचगान गर्ने । यत्तिमै उनको माघी भव्य हुन्छ । रहरअनुसारको खर्च पनि खासै होइन तर ५५ वर्षीया गीताका लागि चिसोका कारण सानो रहर ठूलो कहर बनेको छ । दिनभरि मजदुरी गरेर बेलुका हातमुख जोर्नुपर्ने उनको दिनचर्यामा अहिले शीतलहर छाएको छ । बिहानै ६ बजे शीतले लुछुप्प भिज्ने गरी कामको खोजीमा उनी घरि नेपालगन्जको रामलीला मैदान त घरि त्रिभुवन, बीपी चोक वरिपरि भौंतारिन्छिन् ।
चार दिनअघि जस्तै बुधबार पनि उनको हात रित्तै रह्यो । ‘काम पाए त माघी मनाउने हो,’ उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘चिसाले कमाइ नै छैन, घर जान पनि मन लाग्दैन ।’ गीतासँगै उनकी नन्द प्रमिला थारू पनि मजदुरी गर्छिन् । उनीहरू रोजगारकै खोजीमा बाँसगढीदेखि आएर नेपालगन्जमा भाडामा बस्छन् । घरमा श्रीमान् छन् । ‘श्रीमान् घरबार हेर्छन्, म काम खोज्छु,’ प्रमिलाले भनिन् । तीन छोरीको पालनपोषण उनकै खर्चमा हुन्छ ।
कमाइ नभएपछि उनले यस वर्ष छोरीले फालेका पुराना लुगाले आङ ढाक्नुपरेको सुनाइन् । चिसामा दिनभरि बाहिर डुलेर मजदुरी गर्नुपर्ने कामको प्रकृति हेर्दा सबैभन्दा बढी स्याहार उनलाई चाहिने हो । यथार्थ भने बेग्लै छ । १० दिनअघि १५ सय कमाउँदा उनले छोरी र श्रीमान्लाई बाक्ला कपडा किनेर न्यानो बनाइन् । आफू भने पुरानैमा खुसी भइन् । ‘आगो तापेर चित्त बुझाउँछु,’ उनले भनिन् । रामलीला मैदानमा गीता, सीता र प्रमिलाजस्ता दुई सयभन्दा बढी मजदुर कामको खोजीमा बस्छन् । एकसरो फाटेका लुगाका भरमा प्लास्टिक सल्काएर आगो ताप्दै उनीहरूको दिनचर्या बित्छ । दिनदिनै शीतलहर चल्न थालेपछि यहाँका मजदुरका मनमा दुई किसिमको चिसो गड्दै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत तराईका ६ जिल्लामा मनाइने माघी पर्व कोरोनाका कारण खल्लो बनेको छ । कोरोना संक्रमण त्रासले घरघरमै बसेर आफन्तबीच पर्व मनाइँदै छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा–१३ सेमरीका हरिनारायण चौधरीलाई पुसको अन्तिम दिन रमाइलो लागेको छैन । माघ १ गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका उनले रौनक नभएको बताए । ‘विगत सम्झिने, बस्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण माघीको उत्साह छैन ।’
थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सेमरीका स्थानीयले हर्सोल्लाससाथ मनाइने माघीमा यस वर्ष खासै खुसी नआएको बताए । थारू समुदायको अस्तित्व जोगाउनकै लागि थारू होमस्टेसमेत सञ्चालन रहेको सेमरीमा एक सातादेखि पाहुनाको विशेष स्वागत र माघी विशेष कार्यक्रम चल्ने गर्थ्यो । माघीको अवसरमा विभिन्न परिकार चखाउने र थारू संस्कृति झल्किने नाचगान देखाइने गरेकामा कोरोना त्रासले रोकिनुपरेको भन्दै स्थानीयले नयाँ वर्ष आएजस्तै नलागेको सुनाए । आफूहरूले सबैभन्दा महत्त्व दिएर मनाउने गरेको माघी अथवा नयाँ वर्षमा दिदीबहिनीलाई अनिवार्य माइतीमा ल्याउने, नयाँ लुगा किनिदिने र मीठा परिकार खुवाउने गरेको सियारी–४ का श्रीराम थारूले सम्झिए । ६७ वर्षीय थारूले पहिलोपटक परिवार र छिमेकमा माघीको उल्लास नरहेको देखेको बताए ।
पश्चिम नवलपरासीमा माघीको एक दिनअगाडि मछवारीका दिन माछा मार्ने, साथीभाइबीच भेटघाट गर्ने गरिन्छ । थारू जातिको नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने प्रचलन छ । माघी पर्वमा पहिले पहिले गाउँको मुखिया चुन्ने प्रचलन थियो । मुखिया चुनेपछि उसले चौकीदार र गाउँमा कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दिने गर्थे तर अहिले त्यो परम्परा हटेको भए पनि माघीमा थारू समुदायले वर्ष दिनभरिको कामको समीक्षा, योजना र आर्थिक कारोबारको छिनोफानो गर्ने गर्छन् ।
अघिल्लो दिन मछवारीका दिन माछा मारेर माघेसंक्रान्तिका दिनमा दिदीबहिनी, आफन्त र गाउँका अगुवा बोलाएर गीत गाउँदै आफ्ना पिरमर्का पोख्ने र रमाइलो गर्ने प्रचलनअनुसार थारू बस्तीमा यसको रौनक बढेको सरावलका दिलीप चौधरीले बताए ।
-दुर्गालाल केसी (दाङ), मधु शाही (बाँके), सञ्जु पौडेल (तिलोत्तमा), नवीन पौडेल (परासी) र कमल पन्थी (बर्दिया)
प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:३६
कमलपोखरीलाई कंक्रिटपोखरी नबनाऊ
माघ १, २०७७ सम्पादकीय
भूकम्पपछि सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा एउटा पाठ सिकिएको थियो– सम्भव भएसम्म तिनको मौलिक स्वरूप मास्दै नमास्ने । तैपनि ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ शैलीले पछ्याउन छाडेको छैन । धरहरा आफ्नै तालले ठडिँदै छ र यतिखेर कमलपोखरी यस्तै विवादको केन्द्रमा छ ।
खासगरी, पोखरीलाई सुन्दर बनाउने नाममा काठमाडौं महानगरले कंक्रिटको जथाभावी प्रयोग गर्न थालेपछि सम्पदा र पर्यावरणप्रति सचेत समूह यसको विरोधमा उत्रिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सांसद तथा कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले त महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पत्र लेखी पोखरी पुनर्निर्माण कार्य रोक्न र सरोकारवालासहितको छलफल राख्न आग्रह नै गरेका छन् । महानगरले सरोकारवालाको यो आवाज सुन्नुपर्छ र जारी निर्माण कार्य हाललाई रोकी मौलिक स्वरूपकै कमलपोखरी बनाउनुपर्छ ।
सहरबीचको पोखरीलाई सुन्दर बनाउने विचार आफैंमा असुन्दर होइन । तर, त्यसका लागि अपनाइने विधि–प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै सुन्दर हुनुपर्छ । पोखरीको प्राकृतिक स्वरूप नै मासेर बनाइने कृत्रिम संरचना हेर्दा जति नै मनमोहक देखिए पनि वास्तविक रूपमा त्यो भद्दा र कुरूप नै हुन्छ । यहाँ, कमलपोखरीको ऐतिहासिक महत्त्व कति छ, यसको सांस्कृतिक मूल्य छ कि छैन र सिमसार नै पनि हो कि होइन भन्नेजस्ता प्रश्नमा अल्झिरहन जरुरी छैन । जे भए पनि, वर्षौंदेखि माझसहरमा विद्यमान यो पोखरीको आफ्नै महत्त्व छ । सुन्दर बनाउने नाममा यसको प्राकृतिक सौन्दर्य मास्नु हुँदैन । कृत्रिम पोखरी त महानगरले अरू कुनै नयाँ ठाउँमा चाहे जसरी नै बनाउन सकिहाल्छ नि, कमलपोखरीको मौलिक स्वरूपमा दख्खल पुर्‍याइराख्नै पर्दैन ।
महानगरबाट कमलपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा भैरहेका केही गल्ती प्रस्टै देखिन्छन् । सर्वप्रथम त पोखरीको आकार नै सानो बनाइँदै छ । यसै पनि समयक्रममा मिचिँदै गएर सानो बनिसकेको पोखरीलाई सुन्दर बनाउने नाममा अझ सानो बनाउनु कुनै हिसाबले जायज हुँदैन । पोखरी सानो बनाउँदा त्यसको चौतर्फी असर पर्छ । पानीको मात्रा घट्छ । जमिनमा पानीको पुनर्भरणदेखि जलचक्र तथा पारिस्थितिक प्रणालीसमेत प्रभावित हुन्छ । सहरमा कथं ठूलै आगलागी भएमा प्रयोग गर्नका लागि पनि पानी पहिले जति हुँदैन । जलाशयमा आश्रित जीवजन्तुमा पनि असर पर्छ । तसर्थ, सहरमा यसै पनि पानीका स्रोतहरू कम भएको अवस्थामा भएकै पोखरीको आकार घटाउनु उचित हुँदैन ।
दोस्रो, यसमा कंक्रिटहरूको प्रयोग असावधानीपूर्वक गर्न लागिएको छ । खासगरी यस्ता फोखरीहरूको घाटमा त्रंक्रिट प्रयोग गर्नु नै हुँदैन । कंक्रिट राखियो भने वर्षाको पानी जमिनमा पुनर्भरण हुन पाउँदैन, जसको असर सोझै पोखरीमा पर्छ । पोखरीमा पानीको मात्रा अस्वाभाविक रूपले तलबितल हुन नदिन यसको घाट क्षेत्रमा हुने पानी पुनर्भरणको ठूलो भूमिका हुन्छ । यसै पनि ढलानैढलान र पिचैपिच भएको सहरमा आकाशबाट परेको पानीले प्राकृतिक जमिन भेट्टाउन मुस्किल छ, यस्तो अवस्थामा पोखरीवरिपरि पनि कंक्रिट नै बिछ्याएर मूर्खता प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ।
तेस्रो, पोखरीको बीचमा क्रंक्रिटको कमलको फूल बनाइने भनिएको छ । महानगर प्रस्ट हुनुपर्छ– सिमेन्ट–संरचनाको मोहले सहर थप कुरूप बन्छ । पोखरीमा सयौं साँच्चिकै कमल फूलाउन सकिन्छ, पर्यावरण, प्रकृति र पोखरीको वास्तविक शोभा नै बिग्रने गरी ढलान–पुष्प ठड्याइरहनु पर्दैन । कदाचित् यसो गरिएमा पोखरीको मौलिकता मासिनेसिबाय केही हात लाग्दैन ।
चौथो, पोखरीको पिँध नै फुट्ने गरी पानी सुकाइएको छ, जुन आवश्यक नै थिएन । पानी नसुकाई नै पोखरी सफा गर्न वा त्यसमा भएको अनावश्यक हिलो फाल्न सकिन्थ्यो । यसरी पोखरी सुकाउँदा पछि पानी नअडिन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था आएमा प्राचीन पद्धति अपनाएर पानी अडाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कालो माटो र इँटालगायत बिछ्याउने आफ्नै पद्धति छ । तर यस्तो अवस्थामा डर के हुन्छ भने पछि निर्माणकर्ताहरूले पानी नअडिएको बहानामा पिँधमा सिमन्टे प्रयोग गरिदिन सक्छन् । त्यसो गरिएमा यो वास्तविक पोखरी रहँदैन, बेलाबेलामा पानी हालिरहनुपर्ने एउटा पौडी पोखरीजस्तो मात्रै बन्छ । त्यसैले यसप्रति सम्बन्धित सबै सचेत रहनुपर्छ ।
पाँचौं, पोखरी पुनर्निर्माण कार्य पारदर्शी ढंगले पनि भैरहेको देखिँदैन, यसबारे सरोकारवालाबीच यथोचित सल्लाह गरिएको छैन । सम्बन्धित सबै पक्षको सम्मतिमा यो कार्य अघि बढाइएको भए, यसमा गल्ती हुने सम्भावना पनि हुँदैनथ्यो, कसैले विरोध गरिरहनु पनि पर्दैनथ्यो । त्यही भएरै, नेता थापाले मेयर शाक्यसित सरोकारवालासित छलफल गरियोस् भन्दै निर्माणाधीन डिजाइन उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका हुन् । तसर्थ, सबै पक्षको सहमतिमा मौलिक स्वरूपकै पोखरी बनाउन अहिलेको निर्माण कार्य रोकिनुपर्छ ।
हिजो रानीपोखरीमा पनि महानगरले जथाभावी बनाउन खोज्दा सर्वत्र विरोध भएकाले पछि मल्लकालीन शैलीमै बनाइएको थियो । त्यो पाठ कमलपोखरीका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । समस्या के भने, सम्पदाहरू निर्माणका क्रममा निर्माणकर्ताले सुरुमा मास्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो नै भन्छन्, तर उनीहरूको कार्यकै कारण संरचनाको मौलिक स्वरूप मासिने गर्छ ।
त्यस्तै, मुलुकमा सम्पदाको मूल्य बुझेका निर्माण व्यवसायीको कमी हुनु पनि अर्को समस्या हो । तर सम्बन्धित सरकारी निकायले उचित डिजाइन गरेर त्यहीअनुसारको काम गर्न लगाएर यस्तो समस्या टार्न सकिन्छ । कमलपोखरीका हकमा त डिजाइनमै त्रुटि भएको देखिन्छ, अब त्यसलाई सच्च्याएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको असारदेखि थालिएको कमलपोखरी पुनर्निर्माणलाई थप ढिलाइ हुन नदिन महानगरले समयमै आफ्नो कदम सच्च्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ । कंक्रिटको अनावश्यक प्रयोग नगरीकनै पोखरीलाई सुन्दर बनाउन कैयौं उपाय छन्, त्यस्तो कौशल महानगरले देखाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले मालको चाल पाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ १, २०७७ ०७:२८
सिनोफार्मसँग क्लिनिकल ट्रायलको कागजात माग
दाहाल-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन : ‘ओलीलाई सच्याउन सकिएन’
उपराष्ट्रपति निवासमा दाहाल-भट्टराई वार्ता
खोपको सहज पहुँच कहिले ?
कृष्ण आचार्य, स्वरूप आचार्य
छाङरु र तिंकरका दुई विद्यार्थीलाई सशस्त्रले पढाउने
दाहाल–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शनका ६ सन्देश
अपडेटः शनिबार, १० माघ, २०७७ । ०७ : ५० बजे
अखण्ड भण्डारी माघ ९, २०७७
समाचारमा ठूलालाई ‘तपाईं’ र सानालाई ‘तिमी’ छापिन्थ्यो । यस्तो विभेद हटाउने अहिले पहिल्यै टुंगोमा पुगे पनि राजालाई ‘बक्स्यो’ लेख्नैपर्ने अवस्था थियो । अनि, लोकतन्त्र आएकै...
के होला देशको दशा–दिशा ?
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम माघ ९, २०७७
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा विभिन्न विचार आदान–प्रदान भइरहेका छन् । बहस चलिरहेको छ, विघटन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर ।...
गरिबी निवारणमा (अ)सफलता
केपी पाण्डे माघ ९, २०७७
विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री भएलगत्तै चासो दिएको एउटा क्षेत्र हो– गरिबी । उनले आउँदो असार मसान्तभित्र गरिबीको परिचयपत्र बाँडिसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । राजनीतिज्ञले चासो लिनैपर्ने विषयमा उनले...
दल–संरक्षित प्रजातन्त्र !
शान्ता मरासिनी माघ ९, २०७७
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको तीन दशकयता झन्डै दुई दर्जन सरकारको दलीय बुहार्तन खेप्न आम नेपाली बाध्य भए । शान्ति, विकास, समृद्धि, समानता र न्यायको बाटो खोजेर मतदान...
खोपको प्रारम्भिक खुसी
सम्पादकीय माघ ९, २०७७
पक्कै पनि यो खुसीको खबर हो– निकट भविष्यमै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानको प्रारम्भिक चरण सुरु हुने निश्चित भएको छ । त्यसका लागि, भारत सरकारले...
भीम रावल माघ ८, २०७७
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको गोप्य मन्त्रणापछि संविधान मिच्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई यही माघ १...
शिशिर वैद्य माघ ८, २०७७
काठमाडौं उपत्यकाले अनेकौं पटक पानीको हाहाकार र अनिकाल भोगेको छ । परापूर्वकालमा सुख्खा पर्दा उपत्यकाका मानिसहरु भगवान पुकार्थे, जात्रा गर्थे । बुँग द्य (रातो मच्छिन्द्रनाथ)...
सन्दर्भमा – हिजो र आज
किशोर नेपाल माघ ८, २०७७
जनताको सार्वभौम संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटनयता देशको राजनीतिक वातावरण कोलाहलमय बनेको छ । सहर–बजारमा नानाथरी हल्ला फैलिन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भैरहेको छ । तर,...
कति सुदूर काठमाडौं !
चन्द्रकिशोर माघ ८, २०७७
कुनै पनि प्रदेशको निर्माणलाई केवल त्यसको नाम राख्नु, सामाजिक–सांस्कृतिक वा अन्य आधारमा सीमा बाँध्नुसम्म मात्र सीमित राख्न सकिन्न । प्रदेशको निर्माण यसको प्रत्येक अंगको विकासको एक...
हामी तंग्रिँदै छौं
शेखर गोल्छा माघ ८, २०७७
विश्वले सायदै सन् २०२० लाई सम्झिन चाहला, तर नचाहेरै पनि बिर्सन सकिनेछैन । नेपालका लागि पनि पहिले कहिल्यै भोग्नु नपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्या लिएर...